टिप्स/सौन्दर्य::Leading Digital News Portal Of State7| Political News, Science, Social, Sport, Economy, Business, Entertainment
दार्चुला । संसारमा हरेक मान्छेको एउटै चासो हुन्छ, पैसा कसरी कमाउने ? सुख-सयल कसरी प्राप्त गर्ने ? संसारभरमा नै पैसा कमाउन नचाहने मानिस कमै होलान् । पैसा कमाउनका लागि कोशिसि पनि आवश्यक पर्दछ । त्यसका...
दार्चुला । केटीहरु स्वभावैले लजालु हुन्छन् । त्यसैले बाटो हिँडिरहेको कुनै पुरुष मन पर्‍यो भने उनीहरु खुलेर व्यक्त गर्न सक्दैनन् । चोरी-चोरी हेर्छन् । त्यसैले उक्त पुरुषले थाहै पाउँदैन कि कुन केटीले उसलाई मन...
माघे सक्रान्तिमा घिऊ, चाकु, तरुल, तिलको लड्डुका साथै खिचडी पनि खाने प्रचलन छ । घिउ, चाकु खानुको महत्व छुट्टै छ तर खिचडी खाँदा स्वास्थ्यमा यस्ता फाइदा पुग्छन् सायद तपाईंलाई थाहा नहोला । धेरैजसो मानिसले खिचडीलाई...
काठमाडाैं । चिकित्सकहरूले निमोनिया रोग लाग्न नदिन बालबालिकालाई पर्याप्त स्तनपान गराउन सचेत गराएका छन्। चिकित्सकहरूले निमोनिया विरुद्धको खोप बालबालिकालाई नियमित लगाउन सके निमोनिया रोगबाट बच्न सकिने पनि स्पष्ट पारेका छन्। विश्व निमोनिया दिवसको अवसर पारेर...
वर्षमा एकपटक आउने चाड हो भनेर खानपिनमा ध्यान नदिने स्वभाव आमनेपालीको देखिन्छ । तर, यही १० देखि १५ दिनको अवधिको हाम्रो जीवनशैलीमा गरिने लापर्बाहीले मृत्युको अवस्थासम्म पु-याउन सक्छ । खानका लागि बनाइएको चाडको रूपमा...
दशैमा खसीको फिला बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ, यस्तो छ अचुक उपाय
अन्य समयमा कामको चटारोले हामी खाना राम्रोसँग बनाउन र खान पनि फुर्सद पाउँदैनौँ। अहिले दसैँको बेला फुर्सदले घरमा बसिरहनु भएको छ। तर के पकाउने कसरी पकाउने भन्ने चिन्ता लिइरहनु भएको छ भने, आउनुहोस् आज...
दार्चुला । खानेकुरा खानेमात्र भनेर हुदैन । कुन चिज कहिले खाने के सँग खाने के सँग नखाने यस्ता कुराहरु पनि बुझ्नु जरुरी छ । अन्यथा हामिले खानाबाट अमृत पाउनुको साटो बिष पाइरहेका हुन्छौ । खानाको...
आँप सबै उमेर समूहले रुचाउने फल हो । हामी सबैको रोजाइमा आँप पर्ने भएपनि आँपको पातका फाइदाबारे कमैलाई मात्र थाहा छ । आँपको पात अरु फलफूलको पात जस्तै देखिन्छ । आँपको पातमा भिटामिन ए, बी,...